ရွှေတိဂုံ ဘုရား အရှေ့ဘက်က ဘဝတူမိဘမဲ့ဂီတ ဝါသနာရှင် A4 ကျော်စွာ ကို သူ​ရေးထားတဲ့သီချင်းမှာ Rapဆိုဖို့ စတူဒီယိုခေါ်သွားခဲ့တဲ့ ယုန်လေး” | CeleTrend
ရွှေတိဂုံ ဘုရား အရှေ့ဘက်က ဘဝတူမိဘမဲ့ဂီတ ဝါသနာရှင် A4 ကျော်စွာ ကို သူ​ရေးထားတဲ့သီချင်းမှာ Rapဆိုဖို့ စတူဒီယိုခေါ်သွားခဲ့တဲ့ ယုန်လေး”
ပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးကတော့ အနုပညာအပေါ် ချစ်ပြီးအနုပညာလမ်းမှာ လျှောက်လှမ်းဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့ တက်သစ်လူငယ်တွေကို ကူညီပံ့ပိုးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။
ဒုက္ခရောက်သူတိုင်းကို အမြဲ တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီပေးတတ်တဲ့ စိတ်ထားကောင်းလွန်းတဲ့ ပရဟိတစိတ်အပြည့်ရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် အနုပညာမောင်နှမတွေအပြင် ပရိသန်တွေကပါ လေးစားချစ်ခင်နေကြရတာပါ။
တက်သစ်လူငယ်တွေကိုလည်း အမြဲ ပံ့ပိုးကူညီပေးတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ယုန်လေးကတေယ့ မကြာခင်က သူကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကူညီထားတဲ့ မိဘမဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဂီတဝါသနာပါ​တဲ့ A4 ကျော်စွာ ကို ဒီနေ့မှာတော့ “ကိုယ်လည်း အားနေတာနဲ့ Studio သွားပြီး ကျွန်တော် အခြေခံ လူတန်းစားဘဝတွေ အကြောင်းရေးထားတဲ့သီချင်းလေးမှာA4 ကျော်စွာ ကို Rap ပေးဆိုလိုက်တယ် . သူတော်တော်ပျော်နေတယ် . ပထမဆုံး Studio ရောက်ဖူးတာတဲ့Moe Moe ကလည်း Piano မေတ္တာ ဖြစ် ဝင်ရောက်ကူညီနောက်တစ်ယောက်ထပ်ပါသေးတယ် Rap “ဆိုကာ Studioရောက်ပုံရိပ်လေးကို ဝေမျှခဲ့တာပါ။
အနုပညာဝါသနာပါပေမယ့် ဘဝရဲ့ဝမ်းရေးအတွက် ဝါသနာကိုရှေ့တန်းမတင်နိုင်တဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ယုန်လေးကတော့ တကယ့် ကယ်တင်ရှင် ပါပဲနော်။CeleConnectionsပရိသတ်ကြီးလည်း သီချင်းလေးထွက်လာရင် အားပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ ယုနျလေးကတော့ အနုပညာအပျေါ ခဈြပွီးအနုပညာလမျးမှာ လြှောကျလှမျးဖို့ ခကျခဲနတေဲ့ တကျသဈလူငယျတှကေို ကူညီပံ့ပိုးနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပါ။
ဒုက်ခရောကျသူတိုငျးကို အမွဲ တတျနိုငျသလောကျ အကူအညီပေးတတျတဲ့ စိတျထားကောငျးလှနျးတဲ့ ပရဟိတစိတျအပွညျ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတာကွောငျ့ အနုပညာမောငျနှမတှအေပွငျ ပရိသနျတှကေပါ လေးစားခဈြခငျနကွေရတာပါ။
တကျသဈလူငယျတှကေိုလညျး အမွဲ ပံ့ပိုးကူညီပေးတတျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈတဲ့ယုနျလေးကတယေ့ မကွာခငျက သူကိုယျတိုငျသှားရောကျကူညီထားတဲ့ မိဘမဲ့တဈယောကျဖွဈပွီး ဂီတဝါသနာပါတဲ့ A4 ကြျောစှာ ကို ဒီနမှေ့ာတော့ “ကိုယျလညျး အားနတောနဲ့ Studio သှားပွီး ကြှနျတျော အခွခေံ လူတနျးစားဘဝတှေ အကွောငျးရေးထားတဲ့သီခငျြးလေးမှာA4 ကြျောစှာ ကို Rap ပေးဆိုလိုကျတယျ . သူတျောတျောပြျောနတေယျ . ပထမဆုံး Studio ရောကျဖူးတာတဲ့Moe Moe ကလညျး Piano မတ်ေတာ ဖွဈ ဝငျရောကျကူညီနောကျတဈယောကျထပျပါသေးတယျ Rap “ဆိုကာ Studioရောကျပုံရိပျလေးကို ဝမြှေခဲ့တာပါ။
အနုပညာဝါသနာပါပမေယျ့ ဘဝရဲ့ဝမျးရေးအတှကျ ဝါသနာကိုရှတေ့နျးမတငျနိုငျတဲ့ လူငယျတှအေတှကျ ယုနျလေးကတော့ တကယျ့ ကယျတငျရှငျ ပါပဲနျော။CeleConnectionsပရိသတျကွီးလညျး သီခငျြးလေးထှကျလာရငျ အားပေးဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော။
1 Million Comments ရရင် ထီးပုံစံဆံပင်ညှပ်ပြမယ်ဆိုပြီး စိန်ခေါ်မိခဲ့တဲ့အမျိုးသားရဲ့အဖြစ်(ရုပ်သံ)